"Bibirevo" (nangaphansi komhlaba). "Bibirevo" metro station
On umbuzo yini Bibirevo, "Metro kanye endaweni yokuhlala yenhloko-dolobha" - wathi abakhe zabomdabu amadolobhakazi amakhulu wezwe lakithi. Futhi-ke, kulungile. Ingabe igama zokuthutha owaziwa nokunye afanayo ugcwale kunabantu eziyinkulungwane.
Nokho, hhayi ukuthi lolu lwazi kukha phezulu? Kufanele uvumelane, "Bibirevo" on the esitimeleni lubonakale cishe ngokushesha, futhi lokhu ngokuzenzakalelayo kusho ukuthi overestimate ukubaluleka kanye isidingo isayithi ukuthi empeleni akwenzeki.
Kulesi sihloko sizogxila kule eMoscow metro station. Abafundi bayofunda kabanzi hhayi kuphela m. "Bibirevo", kodwa futhi mayelana layo umlando, izici kanye nomklamo of esitobhini ngomshoshaphansi. Ungakhohlwa ukuthi ingqalasizinda phansi, etholakalayo kule ndawo, futhi uyakufanelekela isabelo ukunakwa.
Isigaba 1. incazelo Jikelele
Ngokokuqala ngqá, "Bibirevo" metro station wavulwa ngaphambi nje kokuba kufike uNyaka Omusha, ngo-December 31, 1992. Namuhla, kuyinto stop 149th yonke eMoscow Metro futhi uhlala phakathi kweziteshi "Altufyevo" futhi "Otradnoe".
Ngemva sehlo ezivusa amadlingozi zomlando njengoba ngokuwa kweSoviet Union zonke lena ezokuthutha ibutho lokuqala, elakhiwa kanye siyasebenza kuze kube manje mhlawumbe. Zonke ezinye kwadingeka sivalwe noma ngenxa yengozi zabo, kungakhathaliseki ukuthi ngenxa unprofitability.
Ngomqondo onabile, uma kuba sobala ukuthi "Bibirevo" - esitimeleni, okuyinto ogama lakhe behlonipha esifundeni esiseduze of the gama elifanayo.
Ngaphambili, eminyakeni embalwa nje edlule, kwaba stop sokugcina. amamitha enjalo. "Bibirevo" eyakhelwe ekuqaleni, kodwa emva kwesikhathi line enwetshiwe. Ngokomthetho musa akuzange kube nzima kakhulu: nje zako kwaku ophumayo okuthiwa noma kwangqingetshe, lapho izimoto ophendukayo. Lapha kwakudingeka Yiqiniso, ihlanzekile.
Ziningi iziteshi ezahlukene, kokubili ngokujulile futhi olukha phezulu kakhulu, eMoscow. "Bibirevo" Metro sabekwa ngo-ukujula encane, waba ngaphansana kunabanjengonkulunkulu amamitha ayishumi.
Isigaba 2. Umlando esiteshini futhi igama layo
Njengoba kushiwo ngenhla, lokhu kuma kwezithuthi zomphakathi Uvule ngenxa eziphuthumayo: yokuhlala endaweni kancane kancane ngosayizi, okusho ukuthi izakhamuzi zakhona ziye zaba abadinga usizo olukhulu i zokuthutha futhi uphambili. Bese kuthi-ke abaphathi idolobha kwadingeka futhi ukunweba line ekhona enyakatho.
Congress izimoto ukuvula ususwe ngemva kweminyaka emibili emva ivela khona, okuyinto ngokomthetho kungaba inkomba yokuthi izinga ukwanda yenhloko-dolobha yaseRussia.
Ungase futhi ngokuqiniseka futhi ukuthi "Bibirevo" - esitimeleni, ogama lakhe abazange ngokunembile zivumelana indawo esiteshini. Uma ucabanga ngokunengqondo, ukuthi Ngokombono ezindawo umbono, lokhu kuma futhi "Altufyevo" kwakuzomelwe emuva.
Isigaba 3. Imininingwana
Emnyango Esiteshini ngamehlo ngokushesha "aphonswe" amakholomu enhle ukuthi ukuphumula ngomusa setshe Monolithic. amahle kakhulu futhi isakhiwo ngempela yasekuqaleni.
Ngokuvamile, singasho ngokuqiniseka ukuthi "Bibirevo" - Esiteshini cishe ngokuphelele eyenziwe ngemabula. Nokho, ingxenye, ezansi, futhi kancane phezulu, ke lavuselelwa nge uhlobo olukhethekile - Ufaleyskaya.
Phansi kuyinto grey, futhi phakathi nendawo ungabona izikwele egwadle abomvu.
izivakashi eziningi zithi izakhi wezangaphakathi is kuhlangene kahle kakhulu futhi imibala ngendlela emangalisayo uvumelane nomunye.
Kodwa akugcini lapho. Once ngaphakathi esiteshini, hamba kancane ezijulile. Kukhona elinye futhi iphuzu elincane isithakazelo: ezihlukahlukene Isango ihholo lungaphansi uhlobo yayo yokwakheka ezifana abaculi abadumile njengoba A. M. Ladur no D. A. Ladur.
Isigaba 4: Imininingwane
Mhlawumbe kusukela iphuzu lobuchwepheshe umbono, "Bibirevo" abangekho zihlukaniswa okwakhe. Nakuba abakhi Angisho izintandokazi ajwayelekile kakhulu uphethiloli. Iqiniso ukuthi sise amamitha angu eziyishumi ukujula.
Phela, kufanele kuphawulwe ukuthi ukuklanywa phansi ingilazi Ezindaweni zokwamukela izivakashi engakaze abathintekayo.
Iningi usuku ayeke ngempela eyihlane. Lokhu kungenxa nendawo okuthiwa endaweni yokuhlala enye ingxenye yomuzi. Lapho kukhona abagibeli? Kunengqondo ukuphetha ngokuthi ekuseni nakusihlwa.
Ezikhathini abavamile, lapho abantu bendawo musa ukuya emsebenzini noma ebuyela ekhaya, izimoto ikakhulukazi uhhafu ezingenalutho.
UNkulunkulu wajabula ukuqaphela ukuthi abasebenzi wenza konke okusemandleni ukuze kube lula ukuphila abagibeli bayo: izimpawu kahle esikhanyayo ukusiza ngaphandle kwezinkinga futhi nobunzima ukuze uthole isitimela, futhi imoto ngayinye olunezinombolo ngokucophelela.
Isigaba 5 iminyango ukufakelwa
Sekukonke, kukhona ihholo amabili esiteshini, kokuya lula emigwaqweni ezahlukene.
South okukhipha kungaholela ezitaladini abajikelezayo njengoba Bibirevskaya, Prishvina futhi Pleshcheeva. Futhi ixhunywe nge esizihambelayo futhi emsamo.
Kodwa ngokusebenzisa phansi emnyango ihholo ungathola esiteshini uqobo. Wenziwe e imibala emnyama, ophahleni brown uhlezi phezu cylindrical amakholomu encane, ahlotshiswe amathoni abamnyama.
Unit 6. Izimpawu zokubekisa zase ngokufanele phezu
Russia ... Moscow ... "Bibirevo" Metro ... Uyazi ukuthi kahle ngangokunokwenzeka, lezi zindawo ezintathu? Ubuningi izikhumbuzo kwamasiko!
Ngokuqondene ezikhangayo zale ngxenye womuzi, bona alapha ezintathu:
Cinema "Ihora Movie". Konke lokhu indawo has amakamelo ezine, ezimbili zazo isici 3D-technology. Session ngesikhathi ungakwazi ukujabulela abantu 540. Izivakashi ikakhulukazi adunyiswe izihlalo ukhululekile, okungathatha ngendlela umzimba, kanye hardware entsha, ekuletheni i wokubuka injabulo okuhle ngendlela engakholeki. Zonke amafilimu ziboniswa esibukweni giant.
Cinema "Mars." Maye, yokudlela ivaliwe namuhla. Uma ngikhuluma iqiniso, uye wasebenza isikhathi eside kakhulu. Ngo ngempela isikhathi esifushane ngemva wokuvulwa kwadingeka sivalwe ngenxa unprofitability. Manje abanikazi isakhiwo isetshenziselwe izinjongo zakhe siqu, kodwa kukhona kokuqagela ukuthi ekugcineni kabusha ibe ukuzijabulisa eziyinkimbinkimbi esikhulu.
Historical Museum ngokuthi "Motherland". Lokhu embukisweni yakhelwa isitoreji izinto ezihlukahlukene ezihlobene umlando ezweni lakubo. Zonke izivakashi nazane ngamunye wabo ngaphandle kwezinkinga. Ngokuvamile, nakhu kufika izingane abasesikoleni nabafundi, ababizwa intsha yokushisekela izwe. Umlando waleli Museum ngempela ezithakazelisayo. Konke kwaqala, njengoba kaningi kwenzeka ukubuthwa ezivamile. Thishela we sendawo nenombolo esikoleni 139 ziphephile igcinwe ehhovisi lakhe. Kodwa kancane kancane Inombolo yabo lenyuka, futhi isikhala kumane ayisekho ngokwanele. Yingaleso sikhathi-ke wanquma ukuvula Museum wangempela, kamuva waba eyingqopha wendawo owaziwa.
Isigaba 7. Ground Ingqalasizinda
Budebuduze esiteshini ungathola izinhlobo eziningi ezahlukene ezikhungweni, esingokwemvelo, endaweni ngokuvamile yokuhlala edolobheni elithile elikhulu e.
Ngaphakathi endaweni engaba 800 metres kusukela "Bibirevo" esiteshini University itholakala. Ngezikhathi zakusihlwa, intsha ngaphandle inkinga uyakhululeka omunye kuma-nightclub.
Labo othanda yokuphila asebenzayo, amakilabhu ezemidlalo eziningana futhi zokuzivocavoca.
Omama bamakhaya futhi umhlalaphansi uzibuze Bibirevo ukuthola indawo elungile ukuphila. Kukhona inala izitolo, boutiques kanye nezimakethe, kuhlanganise zemvelo. Ukuthenga isikhungo, ukunikela konke kusuka ukudla ukuze ifenisha, usebenza amahora amaningi futhi okukhipha kangako noma abangafundile nhlobo.
Isigaba 8. Ulwazi olubalulekile
Mhlawumbe into ebaluleke kakhulu udinga ukwazi zonke isihambi - kuyinto iwashi esiteshini. Lapha zihambisana izifiso izakhamuzi zendawo. Vula kaMasipala sisebancane impela, ngesikhathi 5:35. Nokho, kufanele sinake yokuthi ngemva eyodwa ekuseni ukuze ufike lapha ngeke aphumelele.
Manje ngenxa opharetha mobile. Ukukhulumisana okuhle kusekelwa kuphela opharetha ezintathu: MTS, Beeline futhi MegaFon. Make Up noma ukubukeka oyifunayo kwi-Inthanethi usebenzisa iselula angase enziwe ngaphandle kwezinkinga, njengoba kuqhathaniswa, isib, kusukela iziteshi akhiwe ngaphakathi inhlokodolobha Garden indandatho. Konke lokhu akuyona kangaka ngenxa omisiwe imishini gcizelela, njengoba ngenxa engajulile emplacement esiteshini.
Area, etholakala eduze metro station "Bibirevo", abadumile ukuze kuvelela izwe ezokuthutha. Amabhasi ezingxenyeni ezihlukahlukene komakhelwane hamba cishe ubusuku nemini.
"Coral Castle" Edward Leedskalnin - uphawu anqobe adonsela phansi eMhlabeni, noma ubufakazi bokuba khona njengabafokazi?
"Brigantine" Ihhotela (Gelendzhik): incazelo, ezokungcebeleka kanye nokubuyekeza
Aya - Cape, elise eCrimea
Kuyini cybernetics? Isayensi, yandisa imingcele kungenzeka
Indlela ukuxhuma ugesi kuleli zwe. Pole ugesi kuleli zwe
Iqembu "Eorsi." biography
Umuthi 'Nazivin' izinsana
Usizo lokuqala for waphuka.
Angelina Mirimskaya: Biography futhi Filmography ka actress
Permogorskaya Umdwebo: kusukela ekuqaleni kuze kube namuhla